A ga-achụpụ ndị Naịjirịa iri asatọ e boro ebubo wayo na USA: Dabiri-Erewa | odumblog
A ga-achụpụ ndị Naịjirịa iri asatọ e boro ebubo wayo na USA: Dabiri-Erewa
posted on Aug. 24, 2019 at 5:15 am August 24, 2019
Onyeisi oche Nigerians in Diaspora Commission (NIDCOM), Abike Dabiri-Erewa, ekwuola na Fraịde na Gọọmentị Naịjirịa ga-achụpụ mmadụ iri asatọ ndị eboro ebubo wayo n’akụkụ obodo United States of America (USA).
Dabiri mere nkwupụta n’akwụkwọ ozi nke ya onwe ya binyere aka na ya ma zigara ya ndị Daily Post.
Ndị USA na Tọzde, wepụtara aha mmadụ iri asatọ, ndị e kwuru na ha na-egwu ndị mmadụ wayo.
Mana Dabiri-Erewa na mmeghachi ahụ, gwara ndị a e boro ebubo ka ha gakwuru ndị nchekwa USA n’onwe ha, iji wepụ aha ha n’akwụkwọ. O kwuru na ọ bụrụ na ha emeghi otu a, na ndị Naijiria ga-agba mbọ hụ na-achụpụrụ ha n’obodo a, ma ọ bụrụ na ewepụta akwụkwọ nkwekọrita nke dị n’etiti Naịjirịa na USA.
O kwuru na ha na-echebara ụdị ebubo a nnukwu echiche. O kwuru na ibo ebubo apụtaghị na aka onye ahụ adịghị ọcha. Ya mere ọ gwara ndị eboro ebubo ka ha ga gosi onwe ha ma kwuo na ha (NIDCOM) ga enyocha ya bụ okwu.
O kwukwara na ụdị agwa ụfọdụ ndị Naijiria na-akpa na-ebutere obodo ihere ebe ọ dị ukwuu. Mana o tinyekwara na agaghị eji agwa mmadụ ole na ole were tụnyere agwa nde kwuru nde mmadụ. Ya mere, ọ rịọrọ ka akwụsị ite Naijiria ma ọ bụ ndi Naịjirịa ure n’ihu.
Tags:BBC Igbobbc newsBIAFRABuhariChannelsDabiriDaily postFBIfootballFraudsFulaniFULANI HERDSMENIgbo blogIgbo NewsIgbo songsNGA vs SOUTH AFRICANigeriaNigerian PoliticsOdumblogRUGASahara ReportersSenateSoccer
Onuorah Jennifer August 24, 2019
Ihe anyị ga-eme Buhari ma ọ bata Japan: IPOB
Ndị enyi Minista Buharị so na mmadụ 80 ndị FBI bipụtara aha ha maka iri ọrụ: Reno